‘सलाम रोल्पा’ अर्थात् समयको बकपत्र | Thenextfront
‘सलाम रोल्पा’ अर्थात् समयको बकपत्र
सलाम रोल्पा, यो जनयुद्धको अभिलेख हो । यो ऋषिराज बरालको भूमिगत जीवनसित सम्बद्ध अनुभूतिको खुला डायरी हो । एक अथृमा यो खुला बकपत्र हो । यसमा उनको भूमिगत जीवन मूलतः पश्चिम क्षेत्र गण्डकदेखि सेतीमहाकालीसम्मको हिँडाइ र भोगाइको अनुभूतिपरक अभिलेख पाइन्छ । यो एउटा व्यक्तिको अनुभूति हो । तर यति मात्र होइन, यो वर्गसंघर्षमा लागेको, जनायुद्धमा होमिएको एउटा बुद्धिजीवी, एउटा सांस्कृतिककर्मीको अनुभूति हो । यहाँ रागात्मकता होला, तर यी अनुभूतिहरु विचारको घेराभन्दा बाहिर छैनन् । निकै रोचक छन् र यिनले गर्भमा रहेका थुप्रै कुराहरुलाई उद्घाटित गरेका छन् ।
‘अभियान बुक हाउस’ बाग बजार द्वारा प्रकाशित यस पुस्तकको भूमिका ‘यस्तै रह्यो मेरो यात्रा’ बाट एउटा अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ :
यी मेरा अनुभव र अनुभूति हुन् । भूमिगत जीवन बिताउँदा महान् जनयुद्धमा जे देखेँ, जे भोगेँ, त्यही लिपिबद्ध गरेँ । केही प्रसङ्गहरू नितान्त वैयक्तिक छन् । तर मैले अलिकति पनि लिपपोत नगरी जस्ताको तस्तै राखेको छु । यो समयको दस्ताबेज हो । त्यतिबेलाको विशिष्ट परिवेशमा लेखिएकाले कतिपय कुराहरू सङ्केतात्मक छन् । डायरीमा समेत लेख्न नसकेका र नलेखिएका थुप्रै कुराहरू छन् । त्यो अहिले भन्दिन, समयका लागि साँचेको छु । जे जे बोल्नुपर्छ समय नै बोलोस् । जे जे भन्नुपर्छ समयले नै भनोस् । तर समयलाई साक्षी राखेर भन्छु—म नयाँ इतिहास निर्माणका लागि एउटा महायात्रामा निस्केको थिएँ । म यात्रामा बाटो हराएको र बाटो बिराएको कुनै बटुवाझैँ अलमलिन चाहन्नथेँ । स्थिति यस्तो होला भनेर सोचेको थियन, कल्पनासम्म गरेको थिइन ।
अहिले फर्केर हेर्दा सबै कुरा कस्तोकस्तो लाग्छ, हो कि होइनझैँ लाग्छ । पुर्बेली अभियानका ती दिनहरू, मोरङबाट नहरको डिलैडिल सुनसरीकोे चतरा, बराहक्षेत्र, लेगुवा हुँदै हामी आँखीभुइँ पुगेका थियौँ । फेरि पुग्यौँ मादी । हेलिकप्टरबाट दुस्मनको घेराबन्दी, अनि गुफा पोखरी, नुनढाकी, तीनजुरे, माङ्सिमा, सभापोखरी, गिद्धे लेक र चैनपुर मोर्चा—यात्राको एउटा चरण यस्तो थियो । थुप्रै साथीहरू गुमायौँ । फेरि ताप्लेजुङका भीरपहराहरू—एम्फुदिन, लेलेप, ओलाङचुङगोला चौँरी गोठहरू र कञ्चनजङ्घाको काख हुँदै सिनाम, कालीखोला र च्याङ्थापु भएर हामी सिक्किम र दार्जीलिङको छेउछाउ पुगेका थियौँ ।
दक्षिणको चर्चा बढी हुन्छ, पूर्वमा पनि भूगोल खुम्चिएको छ । चौँरीगोठ राख्नेहरू भन्छन् : पहिले हाम्रो सिमाना त्यहाँ थियो एक किलोमिटर पूर्व, चौँरीगोठ त्यहाँ राख्थ्यौँ, अब सीआर्पीले त्यता जान दिँदैन । कञ्चनजङ्घादेखि कालीखोला, फालोट (फालेलुङ), सन्दकपुर, मानेभन्ज्याङ, पशुपतिनगर, मेचीबगर र महेशपुर सबै खुम्चिएका छन् ।
पश्चिम त झन् रोचक छ । कैलालीका फूलबारीहरू, बर्दियाका थारू बस्तीहरू—मैनापोखरी, बढई ताल, माइती गाउँ अनि कालिकोट र जुम्लाका भीरपहराहरू, यी परिदृश्यहरू ताजै छन् छातीभरि । अहिले सम्झिँदा कुनै दन्त्यकथाको घटना सम्झिएजस्तो, सपनाजस्तो लाग्छ । एकपल्ट फेरि भूमिगत जीवन बिताएका ठाउँमा पुगेर वर्तमानबारे त्यहाँका बाआमा र गाउँले दाजुभाइहरूसित बसेर भलाकुसारी गर्न पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । गुमेका छन् सबै कुराहरू, दुस्मनसित हामी कहिल्यै हारेनौँ, हामीलाई आफ्नैले हराए । हामीलाई आफ्नैले हराए साथी आफ्नैले । तिनले महान् जनयुद्धका प्राप्तिहरू सबै दुस्मनलाई बुझाए । तिनले आत्मसमर्पण गरे । तिनले हतियार बुझाए, तिनले विचार बुझाए । ती देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका सच्चा दलालमा परिणत भए ।
तर यो सम्पूर्ण होइन, सत्यको अर्को पाटो पनि छ । जारी छ लडाइँ, एउटा मोर्चा हार्दैमा सम्पूर्ण लडाइँ हारेको मानिदैन । लडाइँ जारी छ, भित्रै जारी छ, बाहिरै जारी छ । माओले भन्नुभएझैँ पहाड चढ्ने आँट गर्ने हो भने संसारमा गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन । नयाँ–पुराना प्रतिक्रियावादीरूका विरुद्ध लडाइँ जारी छ । मलाई विश्वास छ,। मलाई विश्वास छ, यस लडाइँमा जनता हार्ने छ्रैनन् । हामी हार्ने छैनौँ—–
« माओ दिवसमा नयाँ पुस्तक
Two Books by Rishi Raj Baral »
2 Responses to “‘सलाम रोल्पा’ अर्थात् समयको बकपत्र”
किताब बजारमा आएको छैन र खै ! आज बागबजार पुरै डुले निराश भएर फर्कनु पर्यो ।
माओबादि सशष्त्र आन्दोलनमा घर परिवार छोडेर लड्न गएका सबै ईमान्दार हुन्छन भनेर सोच्ने गर्थे
गलत रहेछ ।
पढ्दै जाँदा त निराश निराश
यस्तो पनि भयो र ?जस्तो कस्तो कस्तो खिन्न लाग्यो धेरै पटक तर तपाईले क्रान्ति भित्र क्रान्ति गर्न ठुलै साहास गर्नु भएको र नेता भन्ने हरु संगको राजनैतिक र सास्कृतिक क्षेत्रमा दरो बहस र बिजय,
तपाईको दर्शनको आधारमा चलेको जिबन ब्यबहार पढ्दा थाहै नपाई
तपाई हाम्रा चेतनाहरुमा फेरि झनै स्थापित हुनुभएको छ ।
नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने कुरा गर्दैछन नेता देखि कार्यकर्ता सबैले पढे राम्रो हुनेथियो जस्तो पनि लाग्यो सलाम रोल्पा पढिरहँदा ।सपनामा क .किरणले रुदै बुढो भए अब तपाईहरुको जिम्मा …. भनेको कुरा साँच्चै जस्तो लाग्छ
यस्तै यस्तै लाग्यो पढिरहेँ
एक पटक पढ्दा अन्याय गरिएजस्तो लागेर दोस्रो पटक फेरि पढ्दैछु ।अहिले सम्म पढिरहँदा सलाम रोल्पा एउटा बहस हो जस्तो लागिरहेको छ